DAAWO:Madaxweyne Farmaajo oo Booqday carta Dalka Jabuuti. – Marqaannews
Home 2018 July Wararka Maanta DAAWO:Madaxweyne Farmaajo oo Booqday carta Dalka Jabuuti.
DAAWO:Madaxweyne Farmaajo oo Booqday carta Dalka Jabuuti.
July 6, 2018 · by	marqaan · 3
3 Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “DAAWO:Madaxweyne Farmaajo oo Booqday carta Dalka Jabuuti.”
Atoore July 7, 2018 at 1:36 am · Edit
Shirkii lagu qabtay magaalada Carta ee dalka Jabuuti waa la marin habaabiyey labo jeerba.Waxaana jahadii loola niyooday ka badalay Ismaaciil Cumar Geele.Ujeedada shiraakaasu waxay ahayd in soomaaliweeyn loo wada yeero oo nabad iyo heshiis loo raadiyo. Cabdullaahi Yuusuf oo markaas ahaa hogaamiyaha puntlaan iyo Ismaaciil Cumar Geele way ku heshiin waayeen sida ay soomaalidu uga soo qeybgalayso shirkaas.Waxay isku qilaafeen waxaa ka mida ahaa in uu Ismaaciil beesha USC ku yiri keensada 90 qof oo matalaysa deegananidiina.Meesha uu Daaroodna ku yiri saddex qof.Markaas buu Cabdullaahi Yuusuf wacay Ismaaciil oo uu ku yiri war macquul ma aha 3 qof ha mataleen Daarood oo dhan.Hawiyena 90 qof.Ismaaciil waxuu ku jawabay baa la yiri idinku waagii dawladiihii hore baad suubiseen dhulboob oo ad hawiye boobteen.Marka beelaha Darood nooma kala duwana Ismaaciil Cumar Geele iyo Caydiid.Waa noo labo cadaw.
Qaladka labaad ee uu Ismaaciil ka raali noqday ayadoo lagu heshiiyey in caasumad ku meel gaar ah dawlada cusub lageeyo magaalada baydhabo buu Cabdiqaasim Salaad oo loo doortay madaxweyne uu xamar la aaday dawladii.Xamar hala aadee gurigiisii buu iska fariistay oo dhaqaalaha lagu bixiyo magaca soomaaliweeyn uu isagau u isticmaali jirey sidii wax uu isagu mulki u leeyahay.Halkaas buu Cabdiqasim ku dhammeeyey afar sano.Cabdiqaasim meeshuu soomaaliweeyn wax u qaban lahaa beeshiisa Cayr buu soo u raray oo uu dajiyey Marka iyo Baraawe.Dadkii u dhashay magaalooyinkasna qaar waatii la gumaaday qaarna naftooday la carareen.Cabdiqaasim iyo Xassan Daahir Aweeys waa kuwii ku khudbeeyey Marka iyo Baraawe waa dawlad gobaleed is maamul musha..Cabdiqaasim iyo Xassan waxay yiraahdeen maamul gobaleedka shabeelaha hoose waxaa madaxweyne ka ah Indha Cadde.
Halkaas markay xaajo gaartay oo uu Cabdiqaasim marin habaabiyey wixii lagu heshiiyey Ismaaciil ma oran Cabdiqaasim wuu ka baxay waxaan ku wada heshiinay.Sababta uu Ismaaciil ugu qiri waayey dambiyada uu galay Cabdiqaasim baa ahayd in ujeedada Isamaaciil ay hayd oo kaliya in xukunka soomaaliya ay gacanta ku dhigto beesha USC.
Mar an fogeeyn waxaa Ismaaciil laga sheegay in uu yiri waa tacab khasaaray waxaan Hawiye wakhti iyo maal ku bixiyey.Waayo waxba qabsan waaye.Waxuu yiri baa la yiri meeqaan adduun weynaha u soo baryey?Meeqaan wax u soo shaxaaday?Waan qaldamaye haddii an intaas barkeed u qaban lahaa puntlaan maanta soomaaliya waxaa ka jiri lahayd dawlad la hubo.Mooryaan waa iska mooryaa waligiisba.
Prince of Maakhir July 7, 2018 at 3:05 am · Edit
Dan iyo magac toona inoogu ma jiraan catawga iyo calaacalka aynu Soomaali na la siman rubuc qarni la daba taagannahay. Wax aynaan annagu isu geysanin nagu ma dhicin waayo waynu ogayn nacaybka gaamuray ee Daaroodka loo qabay ee weli na loo hayo. Cabashadan tirada badani annaga ayaynu isku bahdilaynaa oo la inoogu qoslayaa xaqiiqdii.
Atooroow, Soomaaliya oo muddadaas aad soo tibaaxday burbursan ayay Puntland ahayd geyiga keli ah ee ugu nabdoonaa oo weliba haystay dekadda keli ah ee dalka oo idil ka shaqeyneysa. Barri iyo baxar ba Puntland waxba kaga ma xidhnayn oo uga ma aanay baahnayn Xamar iyo madaxdaa Hawiye toona. Dhan walba ayay iskaga filnaan kartay haddii loo daacad yahay. Dakhligii dekadda Boosaaso ka soo galay muddadaas oo dhan maxaa maanta laga hayaa? Maxaa se laga dheefay?
Haddaba Atooroow madaxda Majeerteen iyo guud ahaan beelaha Daarood ee Puntland deggan ayaa eedda iyo eenta ba iska leh oo xambaarsan. Iyaga ayaa musuq maasuq, xin iyo han yari ba isku curyaamiyay oo halka ay maanta yaallaan is dhigay. Farta aynu Hawiyaha iyo Jabuuti ku godaynu annaga ayay nagu godan tahay Atooroow oo waxan aad soo tabisay waa waxa loo yaqaanno ” convenient escapism”.
Waxba yaynaan Hawiyaha ka daba eedaadin ee kullu fidna cinda geel waa madaxda Majeerteen ee inta toodii laga madoobeeyay dad kale tooda hunguriyeynaya oo weli na Xamar u hanqal taagaya. Halka aynu maanta oolno ma aha meel na qabata oo eeddeeda na annaga ayaa toos u xambaarsan. Sharaf dhac weyn bay nagu tahay in aynu sanadkan 2018 Hawiye weli ka cabaadno.
Atoore July 7, 2018 at 7:57 am · Edit
KU:Jaalle Real Maakhir Man.
1.Marka hore ma aynuu cataabayno ee mahad Allaah baan joognaa.Labada cadaw ee geesaha inaga xiga 27 sano ka badan bay dagaalo inagu hayeen waxaan khasaro ahayna kama ay dheefin.Alxamdulillaah oo labadaba gaashaankaan u dhiganay.
2.War Maakhiroow ma nimanka hawiye ee ad aragtay maamulkooda iyo siyaasaddooda miyeynuu ku dayan karnaa oo ku halayn karnaa magaca iyo jiritaanka soomaaliya?War nimanku waxay caan ku yahiin boobka iyo xasidnimada reer puntlaan iyo puntlaanba.Haddii ay heli karaan dadka reer puntlan way gubi lahaayeen intay ka qabaan xumaan iyo xaasidnimo.
3.Ismaaciil Cumar Geele iyo inta la xulufo ah waxba ugama baahnin oo huur iskama saaro.Sida dhabtaa ee jirta Ismaaciil wuu ku khasaaray eexdii uu u eexan jirey beelaha Hawiye iyo Isaaq.Calaa kulli xaal waxba ugama bahnin dadkaas dhibaatada xaasidnimo ka buuxdo.
DEG DEG+DAAWO: Amarkii ugu Cuslaa Abid oo S/land ku soo rogtay Laascaanood & dagaalka Tukaraq oo Waji kale Yeeshay
DAAWO VEDIO: Wararkii ugu danbeeyay ee Tukaraq,P/land & S/land oo isku hanjabay iyo Hub Uruursi socda
DAAWO VEDIO: Taliyaha Ciidamada Somaliland oo Jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq kormeeray & dagaal uu iclaamiyay
DAAWO VIDIO: C/wali Gaas oo Go’aan Xasaasi ah oo ku saabsan dagaalka Tuka-raq Hordhigay Mr. Keating
DEG DEG DAAWO MUUQAALKA: Qalbi dhagax oo isagoo jeebaysan laga dajiyay Addis Ababa oo isagoo Suut xidhan kasoo baxay+Xagee loo wadaa…?(Xog)
Xog Muhim:Qaraxii Buuhoodle Qaabku U Dhacay iyo Cida ka danbeeyey
WAR DEG DEG:Madaxweyne Gaas oo Barlamaanka Hortagaya Kulankii Ugu Danbeeyey Doorashada Inuu Soo Laabanayo La Saadaalinayo
DHAGEYSO: Qalbi Dhagax Oo Shaaciyey Shaqsiyaadkii Fududeeyey In Itoobiya Lagu Wareejiyo
DEG DEG+DAAWO: Isbedelo waa weyn oo laga dareemayo Jig jiga & Wariye xirnaa oo Afka Furtay & ESTV oo laga Baahiyay
DAAWO: Waqtiga rasmiga ah ee la xirayo kalafadhiga 3-aad ee Baarlamaanka Somalia oo la shaaciyay
DAAWO VEDIO: Kullan ka dhacay Hargeysa oo looga hadlay dagaalka Tukaraq & F.Cali Waraabe oo dacwo ka gudbiyay Wasiir Jamaal
DAAWO VEDIO: RW Kheyre oo dhalinyaro badan Goob Maqaaxi kula shaahay Garowe & dardaaran ay is dhaafsadeen